Xildhibaan Xidig oo kismaayo kulamo kula qaatay siyaasiin iyo odayaal – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobalka Jubada Hoose kulamo kula qaatay odayaal iyo siyaasiin ku sugan M/Kismaayo ee Xarunta Kumeel-gaarka ah ee Maamulka Jubbaland.
Dadka uu lakulmay waxaa kamid ah Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Maamulka Jubbaland, Siyaasiin hore Xilal uga soo qabtay Soomaaliya oo kismaayo ku sugan qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee Gobolka Jubada Hoose. Xidig ayaa dhinacyadii uu la kulmay kala hadlay Xaaladad Jubbaland iyo doorashooyinka Maamulkaasi ee sanadkaan 2019.
Xildhibaanada uu la kulmay Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa waxa uu u sheegay in uu kamid yahay Musharaxiinta Xilka Madaxweynaha Jubbaland ee Sanadkaan ayna jiraan caqabado badan oo loo baahan yahay in laga gudbo kuwaas oo ku hor gudban doorasho ka dhacday Jubbaland.
Musharax Madaxweyne Cabdirashiid Xidig ayaa odayaasha iyo siyaasiintii uu la kulmay ka dalbaday in ay la shaqeeyaan Maamulka Jubbaland, waxa uu sidoo kale ku dhiiri geliyay in ay gacan wayn ka geestaan isbadal ka dhaca Jubbaland oo wajahaysa xaalado adag oo dhinaca amniga ah.
Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig ayaa shalay gaaray Kismaayo waxa uuna kaga dhawaaqay in uu yahay Musharax u taagan qabashada Xilka Madaxweynaha Jubbaland ee doorashada 2019. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayuu ugu baaqay in uu soo dhiso Guddiga doorashooyinka iyo Xuduudaha ee Maamulka Jubbaland kuwaas oo laf-dhabar u ah doorasho sanadkaan ka dhacda Jubbaland.